प्रोग्रामिंग, डिजाइन, UI र कोडिंग
हो, हामी अन्य कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूका लागि प्रोग्रामि do्ग गर्छौं र १ 19863पछिदेखि। हामी प्रोग्रामिंग म्याक, आईओएस, एन्ड्रोइड र विन अनुप्रयोगहरूको आनन्द लिन्छौं। हामीसँग फाईलमेकर डाटाबेस मास्टर पनि छ। हाम्रो आईफोन / आईप्याड अनुप्रयोगहरू million० लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू द्वारा डाउनलोड गरिएका छन्। हामीसँग मोबाइल विकासको एक दशकको अनुभव छ।
हामी अमेरिकामा आधारित छौं तर युरोप र एशियाका शाखाहरूसँग। हामीले धेरै प्लेटफर्महरूमा धेरै अनुप्रयोगहरू सिर्जना गरेका छौं। हामीले सबै अनुप्रयोगहरू यस साइटमा तपाईंले बनाउनु भएको हो र अनुबन्ध अन्तर्गत सिर्जना गरिएको अन्य धेरै जसलाई यहाँ देखाइएको छैन।
तपाईं हाम्रो ग्राहक पृष्ठ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। साथै हामीसँग एक ग्राहक रेभ पृष्ठ छ यहाँ। हामी तपाईं संग एक परियोजना मा काम खुशी हुनेछ। ओब्ज। आईफोन / आईपड टच / आईप्याड / एन्ड्रोइड / म्याक वा PHP वेब अनुप्रयोगहरू र साइटहरूको लागि सी। हामीसँग ग्राफिक डिजाइनका लागि राम्रो व्यक्तिहरू पनि छन्।
हामीलाई किन छान्नुहोस्? किनकि हामी उच्च गुणवत्ता, छिटो, इमान्दार, काम गर्न सजिलो छौं र तपाईंको उत्तम रुचिहरू खोज्दै छौं। हामी घण्टा काम गर्छौं वा प्रोजेक्टको लागि अनुबंध गर्छौं।
यदि तपाईंसँग विचार छ वा मोबाईल वा डेस्कटप अनुप्रयोगको लागि आवश्यक छ भने हामीलाई पठाउनुहोस् ईमेल। हामी तपाईंसँग काम गर्न तयार छौं।
के तपाईं आफ्नो क्षमताहरू बढाउने उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ रमाईलो नयाँ प्रोजेक्टहरू मन पराउनुहुन्छ? प्रशासक, टेक समर्थन, मार्केटिंग र बिक्री बेवास्ता गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईं उत्साही हुनुहुन्छ र पूर्ण वा आंशिक समय उपलब्ध हुनुहुन्छ भने, हामीसँग सामेल हुनुहोस्। हामी स्वागत गर्छौं, संसारको जहाँसुकैबाट पनि, प्रोग्रामरहरू, डिजाइनरहरू र कुनै उत्साहित व्यक्ति। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस।
आईफोन, आईप्याड, आईपड टच, एन्ड्रोइड र अन्य मोबाइल अनुप्रयोगहरू
म्याक / विन अनुप्रयोग विकास
रैपिड अनुप्रयोग विकास (आरएडी)
फाईलमेकर डेटाबेस ग्राहक र वेब अनुप्रयोगहरू।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस र अन्तर्क्रिया डिजाइन
अनुकूलन नियन्त्रण र UI तत्वहरू
स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सम्बन्धित अनुप्रयोगहरू।
रेडियो स्टेशनहरु, रेडियो व्यक्तित्व र ब्यान्ड को लागी अनुकूलित रेडियो मा मांग स्ट्रीमिंग अनुप्रयोगहरु।
किओस्क र टच स्क्रीन सफ्टवेयर
वेब सेवा एकीकरण